अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर १ अर्ब ६५ करोड नोक्सानीमा - Aarthiknews
काठमाडौं । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नोक्सानी गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा बढेको छ । गत आवमा रू. ३ करोड ५० लाख नोक्सानीमा रहेको उक्त कम्पनीको नोक्सानी चालू आवमा बढेर रू.१ अर्ब ६५ करोड पुगेको हो ।
चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा भने कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् विक्री गरेर रू. ५ अर्ब १६ करोड आम्दानी गरेको गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । यस विषयमा कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरण बीच आय गणनामा भएको भिन्नता र आयोजनाले प्राधिकरणलाई आपूर्ति गर्नुपर्ने डिसप्याच नभएको एवं विद्युत् खरीद सम्झौता अनुसार उत्पादन नभएकोले त्यसको असर नाफामा परेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
यस्तै, कम्पनीले विद्युत् विक्री आयबाट रू.८३ करोड घटाइएकोले फागुन मसान्तसम्मको आय वापत रू. २ अर्ब ७६ करोड प्राप्त भएको भएको बताएको छ । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० अर्ब ५९ करोड रहेको छ । कम्पनीले जगेडा भने रू. २ अर्ब ७१ करोड ऋणात्मक रहेको छ । कम्पनीले गत भदौ २५ गतेबाट दोलखा जिल्लामा ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जोडेर विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ ।